Evinrude3HP Lightwin धुन-अप परियोजना | जहाज को बाहिर नाउ मोटर मर्मत
Evinrude3HP Lightwin धुन-अप परियोजना
यदि तपाईंसँग इनिरेड एक्सएनएनएक्सएक्स एचपी लाइटविनको बारेमा टिप्पणी वा प्रश्नहरू छन् भने, कृपया समान ट्यून-यू परियोजना, कृपया तिनीहरूलाई छोड्नुहोस्।
तपाईं पर्छ लग - इन तपाईं टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भने।
बुझाउने पोजीट्रान गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 23: 23
ड्राइभशाफ्ट संलग्न छैन
म मा एक3HP 1952-54 (JW-1) जनसन को प्ररित गर्नेवाला परिवर्तन भयो। म यसलाई अलग लिए रूपमा, तल्लो एकाइ भुइँमा खसे। अब, यो ड्राइभशाफ्ट को प्रोपेलर संलग्न छैन। यो सबै बाटो मा धक्का छ। त्यहाँ एक प्रमुख वा केही अन्य जादू को प्रोपेलर पालो बनाउँछ भन्ने छ?
बुझाउने boatman350 Wed, मा, 01 / 23 / 2019 - 10: 29
जवाफ ड्राइभशाफ्ट संलग्न छैन by पोजीट्रान
त्यसपछि मैले निचो इकाई बन्द गरें र यसलाई एकै साथ राखेर शाफ्टले सबै तरिकामा देखा पर्यो तर मलाई थाहा पाएन कि यदि तपाईले कम इकाई राख्नु हुन्छ भने यो प्रविधि छतमा छ र तपाईँले छेदमा हेर्नुहुनेछ। शाफ्टको लागि खुला रहनुहोस् तर यदि तपाईंले यसलाई राख्नुहुन्छ भने प्रोभले भित्तालाई एक सानो कुञ्जीको सामना गरिरहेको छ जस्तै चीज बोर बाहिर पस्नेछ
बुझाउने boatman350 गुरु मा, 06 / 06 / 2019 - 07: 26
जब मैले मेरो निम्न इकाई लिएँ ...
जब मैले मेरो निचो इकाईलाई ड्राइभ शाफ्टबाट सिटमा एकाइमा सिट गरेँ भने मैले देखेको एक प्रकारको "कुञ्जी" हो जुन मैले निचोडमा पछाडी निस्कन थाल्छु।
बुझाउने ttravis गुरु मा, 06 / 29 / 2017 - 23: 42
यहाँ एक रेखाचित्र हो। https: / ...
यहाँ एक रेखाचित्र हो। http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
- अद्यावधिक- मैले लिङ्क तय गरेको छु।
बुझाउने पोजीट्रान मा शुक्र, 06 / 30 / 2017 - 22: 54
जवाफ यहाँ एक रेखाचित्र हो। https: / ... by ttravis
रेखाचित्र लिङ्क मरिसकेको छ। छैन ...
रेखाचित्र लिङ्क मरिसकेको छ। "Youtu.be" तर YouTube छ के छैन निश्चित!
बुझाउने ttravis मा शनि, 07 / 01 / 2017 - 07: 04
जवाफ रेखाचित्र लिङ्क मरिसकेको छ। छैन ... by पोजीट्रान
मेरो खराब .... यो प्रयास गर्नुहोस्: http: ...
मेरो खराब .... यो प्रयास गर्नुहोस्: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
बुझाउने jakeboat सोम मा, 07 / 10 / 2017 - 23: 17
यहाँ मेरो परिदृश्य हो, र म पहिले माफी माफी माग्छु यदि यो मेरो प्रश्नको लागि सही ठाँउ वा ढाँचा होइन तर म यो जस्तै फोरममा नयाँ हुँ। मलाई एक छोरा छ जो मत्स्य पालन गर्नुहुन्छ र हामी पछिल्लो केहि वर्ष माछा पकडिरहेको छ किनकि त्यो झीलो मा बाहिर जान चाहन्छ कि धेरै पुरानो हो रही छ। राम्रो समाचार हामी मिनेसोटा मा धेरै लाइकहरु मा बस्छौ, खराब समाचार म धेरै पटक डुङ्गाको वरिपरी घटेको छैन। हामीले कसैबाट एक 14'बुट / ट्रेलर पार्यौं र एक निष्पक्ष 3hp Lightwin मोटर। राम्रो सुरुवात तिनीहरूले भन्यो कि यो राम्रो चल्छ। हामी यसलाई एक युग्मित समय निकालेर यो ठीक छ। ठीक छ, मेरो मतलब पूरा थ्रेसहोटल अझै पनि ढिलो थियो, तर मैले सोधे कि यो 3hp हो, मलाई थिचोटि3/4को लागि पूरा गर्न को लागी पूरा गर्न को लागी। त्यसपछि यो मर्न थाले, ठीक छ। मैले केहि चोटि यो3सेकेन्डको लागि माथिल्लो चरणमा पुन: हेरेको देखेको थिएँ, सम्भवतः यो कहाँ हुनुपर्छ। तर यो लगभग हामीलाई झ्यालखानामा झुण्डिएको र मलाई हामी त्यसलाई एकै ठाउँमा मिलाउन चाहन्छु तर म2चक्र मोटर्समा नयाँ हुँ। अहिले सम्म मैले प्लग परिवर्तन गरें र ग्यासलाई पूर्ण रूपमा सुरू गर्न सकियो। यो ट्यांक राख्नुहोस् र यो पहिले जस्तो त्यहि भाग्यो। कुनै पनि मार्गदर्शन / दिशाको सराहना गरिनेछ। यो साइटहरू पढ्ने जस्तै कार्ब किट राम्रो सुरू हुन्छ। कुनै सुझावहरू?
मोटर ईइन्रूड एक्सएनएनएमएक्सएक्सएच प्रकाशविन मोडेल 3e हो।
म मेरो केटालाई डुङ्गा मोटर्सको बारेमा सिकाउन मद्दत गर्न सक्दिन र यो एक राम्रो स्टार्टर प्रोजेक्टर जस्तो देखिन्छ।
बुझाउने ttravis सोम मा, 07 / 10 / 2017 - 23: 35
जवाफ सहयोग चाहियो by jakeboat
को एक राम्रो नजर ...
इग्निशनमा राम्रो लगाउनुहोस्। सबै र मेरा मतलब सबै3एचपी मोटर्स कि पुरानो आवश्यकता नयाँ coils, र तपाईं यो हो जब अंक र कन्सेंसर परिवर्तन गर्न सक्छ। तपाईं बताउन सक्नुहुन्न कि न नत्र ती भागहरू तिनीहरूलाई हेरेर खराब छन्।
मेरो3पनि जाँच 5.5 HP ज्वलन धुन-अप पृष्ठ।
म यसलाई संग छाडा मेरो छोरा बारी अघि गरे जस्तै म पूर्ण धुन-अप गर्न हुनेछ।
बुझाउने jakeboat सोम मा, 07 / 10 / 2017 - 23: 42
जवाफ को एक राम्रो नजर ... by ttravis
आफ्नो धुन अप म कहाँ पाउँछौं ...
मैले तपाइँको ट्युन कहाँ फेला पारेको छु?
बुझाउने राम जेट मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 02 / 11 - 2018: 23
मैले भर्खरै एक जॉनसन3एचपी किन्नुभयो र यसलाई फिक्स गर्दै छु। मलाई आउटबोर्ड र2चक्र इन्जिनको साथमा उचित अनुभव छ। तपाईंको पोष्ट अन्तिम जुलाई पेस गरिएको थियो तर म भर्खरै सामेल हुनुभयो। यदि म कुनै पनि मद्दत हुन सक्छ भने मलाई थाहा दिनुहोस्। मेरो जॉनसन3अलग छ अब प्रतिस्थापन भागहरूको लागि पर्खँदै। यो वास्तव मा एक सुखद र सजिलो इन्जिन मा काम गर्न को लागी - यो डिजाइन गरिएको थियो। यदि तपाइँ जान्नुहुन्न भने जॉनसन र इनिन्रूड एउटै आधारभूत इन्जिन हो।
बुझाउने jakeboat मा मंगल, 08 / 01 / 2017 - 20: 41
त्यसैले म सबै भागहरु पायो ...
यसैले मैले यस साइटको लागी अमेजनबाट इग्गेशन प्रणालीको सबै भागहरू भेटें। यो अति सजिलो थियो। मैले इग्निशन धुनलाई समयको बिन्दुमा सामान्य ओम मीटरको प्रयोग गरेर पछि लागेँ र यहीँ जहाँ म हराएको छु। म बिजुलीको बारे केही पनि थाहा छैन त्यसैले टर्मिनलोजी जस्तै खुला बन्द अनन्त आदि। मलाई भ्रमित छ।
मलाई यो परीक्षण गर्न कुन उपकरण चाहिन्छ? मैले दुवै किनारमा संलग्न गर्दछु? परीक्षकले ओटो पार्ट्स स्टोरमा केटाले मलाई एक क्लिप मात्र बेचेको छ त्यसैले मलाई लाग्छ कि यो गलत मिटर हो? म कसरी भन्छु कि एक नम्बर दुई छ?
बुझाउने ttravis मा मंगल, 08 / 01 / 2017 - 23: 23
जवाफ त्यसैले म सबै भागहरु पायो ... by jakeboat
एक सरल सर्किट चित्र ...
एक साधारण सर्किट जहाँ तपाईंसँग एक ब्याट्रि र हल्का बल्ब छ। जब तपाईसँग ब्याट्रिबाट तार बल्बमा छ, र त्यसपछि बल्ब बाट ब्याट्रिमा तपाईसँग बन्द सर्किट छ। जब एक ब्याट्रीको एक छेउमा र अर्को छेउमा पुग्छ, बिजुली एक नराम्रो बाटोमा फैल्छ। यदि तपाइँ एक तारहरू विच्छेदन हुनुहुन्थ्यो भने, तपाइँ सर्किट खोल्नुहुन्छ, जस्तै कि एक साधारण लाइट स्विच खोल्छ र प्रकाश बल्बमा सर्किट बन्द गर्दछ। जल वाल्वहरू समान काम गर्छन् .... तपाईंले खुला वा बन्द गर्नुहुनेछ।
के तपाईं परीक्षणको लागि हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित गर्न ब्रेकर बिन्दुहरू सटीक समय नजिक छ कि फ्लाईवाहेलमा समयको अंक स्ट्याटर आधारमा टाइम मार्कसँग सम्बद्ध छन्।
यदि तपाईं आफ्नो ओम मीटर लिनुहुन्छ र दुई समस्याहरू सँगसँगै छुनुहोस्, तपाईको ओम मीटरले0वा बन्द सर्किट देखाउनेछ। यदि समस्याहरूले एक-अर्कालाई छुनु हुँदैन भने, पढाइ अनन्तता वा खुला सर्किट हुनेछ। केहि ओम मीटरमा एक सेटिङ छ जहाँ मीटर बज हुनेछ त्यसपछि सर्किट बन्द छ। यसलाई निरंतर परीक्षण भनिन्छ।
ओम मीटर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सर्किट खुला छ वा बन्द छ। हामी भन्छौं कि हामी एक साधारण घरको लाइट बल्ब परीक्षण गर्न चाहन्छौं। यदि तपाइँ लाइटबल्बको आधारमा ओम मीटरको एक नेतृत्व राख्नुहुन्छ भने, र मध्य कनेक्टरमा अर्को, ओम मीटरले देख्नेछ कि बिजुलीले लाइटब्याण्ड फिलाटमार्फत प्रवाह गर्न सक्छ। यदि फिलाश टूटाईन्छ भने, सर्किट खुला छ अनन्त प्रतिरोध द्वारा संकेत गरिएको छ (विद्युत कम भोल्टेज मा हावा मार्फत प्रवाह गर्दैन) त्यसैले सर्किट खुला छ र लाइटबल्ब जलाएको छ। यदि तपाई ओम मीटरमा पढ्ने0वा लगभग0हो भने, बिजुली फिला मार्फत बहने छ र लाइटब्याब राम्रो हुनुपर्छ। ओममिटरले बल्ब लाई हल्का पार्नका लागि पर्याप्त बिजुली पठाउँदैन, तर निरन्तरताको जाँच गर्नेछ वा वा सर्किट खुला छ वा बन्द छ।
यहाँ एक यूट्यूब हो भिडियो विषयमा।
मेरो नजिकको नजिक लिनुहोस् 5.5 HP इग्निशन पृष्ठ जहाँ म समय परीक्षण गर्न कसरी व्याख्या गर्ने एक राम्रो काम गर्छु। यो एक फरक मोटर हो, तर इग्निशन प्रणाली उस्तै नै हो। म सामान्यतया व्यक्तिहरूलाई 3.5 र 5.5 HP दुवै पढ्न प्रोत्साहित गर्दछु।
तपाईंको परीक्षणमा तपाईंको ओहमा लाग्दछ फ्लाईवाहेल अन्तर्गत समयको परीक्षण गर्न मिल्ने छैन त्यसैले तपाईले एउटा छोटो टुक्राको तारलाई तपाइँको ब्रेकर बिन्दुमा जडान गर्न आवश्यक पर्दछ। परीक्षण तारहरू संचालक क्लिपहरू सस्तो र सजिलो छन्। तपाईले स्थानीय हार्डवेयर भण्डारबाट वा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अमेजन। ब्रेकर बिन्दुमा पेंच टर्मिनलमा परीक्षण तारको एक पछाडि क्लिप गर्नुहोस्, जहाँ तपाईले सामान्य रूपमा कुन्डल र कन्डेनसर तारहरू लगायतका रूपमा देखाउनुहुन्छ जस्तै 5.5 मा देखाइएको छ। स्ट्याटर आधारमा एक होल को माध्यम ले परीक्षण तार को अन्य अन्त फीड गर्नुहोस।
अब तपाईले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको ओम मीटरको एक लीडलाई परीक्षण नेतृत्वमा, र अर्को आधारमा जोडेर तपाईंको अंक खुला छ वा बन्द हुन्छ। भूमि अनुसार, म मतलब छ कुनै मोटर वा मोटर मा घुमाउरो पेंच। मोटर आफैलाई अर्को परीक्षण नेतृत्व हो।
अब तपाईं फ्लाईवाहेल घुमाउन तयार हुनुहुन्छ र हेर्नुहोस् कि यदि सर्किट बन्द हुन्छ जब टाइम मार्कहरू सही तरिकाले लाइनमा सही रूपमा देखाइन्छ जुन प्रक्रियामा देखाइएको छ।
तपाईले अर्को प्रक्रियालाई अन्य सिलिन्डरको लागि समय समायोजन गर्न यो प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्छ।
मलाई आशा छ यो मद्दत गर्दछ। टम
बुझाउने jakeboat गुरु मा, 08 / 03 / 2017 - 22: 21
जवाफ एक सरल सर्किट चित्र ... by ttravis
वाह, कि सुपर उपयोगी थियो। ...
वाह, त्यो सुपर उपयोगी थियो। मैले ती निर्देशनहरू पछ्याएँ र इग्निशन प्रणाली धुन अप गर्न सकिएन। मैले यसलाई बाल्टीमा राखे र भाग्यो। यो धेरै राम्रो भाग्यो तर अझै पनि धेरै उच्च अपरिवर्तित हुने छैन, र खैरो नीलो धुवाँले मलाई कारब समायोजन कसरी गरेन। यो राम्रो तरिकाले चलाउँछ किनकि म दाँयामा समायोजन नाउ घुमाउँछ तर यो अघि बढ्छ यो बोतल बाहिर।
मैले सोचेँ कि म कार्ब किट छोड्न सक्दिन किनकि मैले गैस्केट स्टिकिङबाट के देख्न सकेन, यो नयाँ देख्यो। यद्यपि, मलाई अनुमान छ कि म कल कार्ब किट गर्नेछु।
सबै सहयोगको लागि धन्यवाद यो निराशाजनक, तर मजा / शिक्षण।
बुझाउने jakeboat मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 08 / 06 - 2017: 18
जवाफ वाह, कि सुपर उपयोगी थियो। ... by jakeboat
बस अन्तिम दुई दिन बिताए ...
भर्खरै दुई दिन झीलमा बिताए। यो साइट भयानक छ र मलाई अरेन सानो मोटर अप को तय गर्न को लागी अनुमति दिइयो। यसले अहिले ढिलो तर स्थिर चारैतिर राख्छ। धन्यवाद सबै लाखौं सहयोगका लागि। मेरो केटाले आज यो वरिपरि ड्राइभर चलाएको थियो, ठूलो मुस्कान संग।
बुझाउने ttravis सोम मा, 08 / 07 / 2017 - 01: 18
जवाफ बस अन्तिम दुई दिन बिताए ... by jakeboat
मलाई यकीन छ कि तपाईसँग एक महान प्रशंसा छ जुन तपाईलाई थाहा छ कि मोटर राम्रो छ। म आशा गर्दछु कि तिमी केटाकेटीहरूसँग थियौं ताकि उनी अनुभव प्राप्त गर्न सक्थे कि जीवनकाल समाप्त हुनेछ। यो आश्चर्यजनक छ कि कति मानिसहरू ती 3.5 एचपी मोटर्सहरू तय गर्छन्। म यस साइटको लागि केही तथ्याङ्कहरू हेर्दै थिएँ। आज आज 234 व्यक्तिले साइट भ्रमण गर्यो र 3.5 प्रोजेक्टको बारेमा पढ्ने समय बिताए। यी आगन्तुकहरू संसारभरबाट र दर्जनौं विभिन्न भाषाहरूमा छन्। यो अन्य मोटर्स सहित छैन। 3.5 हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय परियोजना हो। तपाईंको मोटरको आनन्द लिनुहोस् र कम्तीमा अर्को 50 वर्षको लागि अन्तिम हुन सक्छ। यदि तपाईंले मौका पाउनुभयो भने, यहाँ केहि चित्रहरू पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईंको जस्तै तस्वीरहरू र टिप्पणीहरू मेरो सबैभन्दा ठूलो इनाम हुन्। टम
तपाईंसँग समय छैन ...
तपाईसँग तपाइँको इन्जिन समय छैन। यो निर्माण गर्दा तपाईंको लागि सकियो। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि अंक क्यामेरा एक्सिन्ट्रिक क्रानकशफ्ट मा सही तरिकाले स्थापित छ र अंक प्लेट राम्ररी स्थापना गरिएको छ। यदि तपाइँ सबै नयाँ भागहरू छन्, कोइल, कन्डेनरहरू र बिन्दुहरू मात्र त्यसलाई स्थापना गर्नुहोस् र अंकहरू खाली गर्नुहोस् र फ्लाईवाहेललाई बदल्नुहोस्।
बुझाउने jakeboat मा शनि, 08 / 26 / 2017 - 07: 33
मैले यो गर्मीमा 3hp Evinrude तय गरेको छ, अर्थ, नयाँ इग्निशन पार्ट्स, कार्ब किट आदि ... मूलतः यस वेबसाइटबाट सबै। हामी यसलाई दुई दर्जनको बारेमा माछा माछा निकाल्नुभयो, र यो राम्रो राम्रो भाग्यो। यो अझै पनि स्पटटर हुनेछ, जस्तै ईन्धनमा छोटो, बीचको दायरामा, तर कम गति र चौडा खुला महान चलिरहेको छ। अब मैले नयाँ समस्या सामना गरेको छु। हामी यसलाई डुङ्गाको लन्चबाट अगाडी बढ्दैछौं र पछि यसको बारेमा दौडने 15 मिनेट सर्जन सुरु / साँच्चै खराब चल्नेछ। यदि म यसलाई कम तल निस्क्रिय गर्दछ भने यसले हामीलाई सुरूवातमा फिर्ता ल्याउनेछ, तर चाँडै = खराब चलिरहेको छ। मैले समायोजनको साथ छेउमा सुरू गरें, यो मोटर मात्र एक छ, यो त्यो अवस्था टाढा जान सक्दैन। नोट यो तथ्य हो कि मैले भर्खरै समायोजन सुईको साथ पत्ता लगाएको छु, पूर्णरूपमा, वा सबै तरिका मा, मोटर अझै पनि मर्नेछैन। म इन्जिनको लागि नयाँ हुँ तर ग्यासको कटौती र मोटरलाई मार्नु हुँदैन? नयाँ प्लग, ग्याँस, इग्निशन कोइलहरू, कार्ब भागहरू, ईन्धन स्थिरता, तारहरू, बिन्दुहरू, आदि। जब मैले प्लगलाई बदलेका थिए उनीहरूले केही कालो, फ्लेकी, बन्दूकहरू लगाए तर मैले खराब देखेको छु। यो पहिले सुरू गर्दा केही सेतो / निलो धुलो धुम्रपान गर्दछ, तर केही पनि डरलाग्दो छैन। मेरो केटा र मलाई झ्यालको अर्को छेउमा केही क्रेपी छेदहरू पाइन्छ, र उनीहरूको प्रतिक्रिया देख्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया देखेर उनीहरूले छिटो पानीलाई हिर्काएर जबरजस्ती पार्छन्। यद्यपि, म लन्चबाट 20 मिनेट फटाउन चाहान्छु। झील 500 एकस को बारे मा छ, यो 3hp को धेरै पानी को कवर गर्न को लागि 15-20 मिनेट को बारे मा लेनी चाहिए? यो हाम्रो पहिलो डुङ्गा हो त्यसैले मलाई निश्चित छैन, म एक 3hp ट्रेलिंग को लागी साँच्चै सानो र राम्रो छ।
जुवाको बारेमा क्षमा गर्नाले आशा गर्दछ कि कसैले केहि प्रासंगिक देख्छ।
बुझाउने ttravis मा शनि, 08 / 26 / 2017 - 10: 54
जवाफ स्पटटरिङ by jakeboat
यो धेरै सम्भव छ र होइन ...
यो एकदम सम्भव छ र असामान्य छैन कि तपाईलाई त्यस कार्ब बन्द गर्न र यसलाई सफापूर्वक सफा गर्न आवश्यक पर्दछ। पुरानो मोटर्सको साथ जो कि जीवन लाई फिर्ता ल्याइन्छ समस्या हो कि ग्याँस ट्यांक मा सानो कण, र ईंन्धन वितरण ढीले कंपन हुन्छ र कार्बोरेटर passageways लाई क्लोग गर्दछ। यो अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि तपाईंले सबैलाई सफा गर्न तपाईंले सबै भन्दा राम्रो गर्नुभयो, समयको साथमा चीजहरू ढोका गर्न ईन्धन भिजाएर केहि पनि छैन। मैले मोटर पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापना गरेको महसुस गर्न दुई वा तीन पटक कार्बोरेटरलाई सफा गर्न पर्थ्यो। यो सबै राम्रो र सामान्य छ। यदि तपाईं उच्च, मध्य, वा कम दायरामा स्पटटरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसको मतलब यो हो कि कार्बमा एक पासग्वे भरी छ। साथै, समायोजन सुई, तपाइँले समायोजन गरेपछि, यसलाई एक्लै छोड्नुहोस्। यो मोटर रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको छैन। तपाईं मोटर रोक्न को लागी रोक्न को लागी रोक्न रोक्नुहोस् जुन कार्बमा तितली वाल्व बन्द गर्दछ। तपाईंलाई कार्ब्याकलाई त्यहि सिजनमा दोस्रो वा तेस्रो पटक सफा गर्न नयाँ कार्ब किट आवश्यक पर्दैन।
बुझाउने हिरोइन मा शुक्र, 10 / 20 / 2017 - 09: 12
टंक भित्र ईन्धन फिल्टर
प्रतिस्थापित प्रवर्तक र गियर केस तेल, रिभिल स्टार्टर, कार्बोरेटर र इग्निशन पुनर्निर्माण गरियो र मेरो 1966 JW21 मा ट्यांक प्यान्टको साथ ट्यांक सफा गरियो, र यो ग्याँसको पूर्ण ट्यांकको साथ राम्रो भाग्यो। तेस्रो वा तेस्रो पटक ट्रेलिंग बाहिर, यो स्पटटर र मर्नेछ। केही मिनेट लागेपछि, छोटो अवधिको लागि सुरू गर्न र चलाउन सक्थ्यो, त्यसपछि sputter र मर्नेछ। रैंपमा फर्केर हिँड्नु भनेको यो दौडने को लागी हेरचाह गर्नु हो, जुन धेरै धुवाँको उत्पादन भयो। आवाज परिचित?
ईन्धन फिल्टर बाहिर जान्छ एक कोन आकार साइटरेटेड धातु एकाइ को आउटलेट मा टैंक को भित्र तुरुन्त माउन्ट गरिएको छ। जब ट्याङ्क पूर्ण भयो, पर्याप्त ईन्धन प्रवाहलाई अनुमति दिन फिल्टरको लागि डुबिएको थियो, तर ईन्धन स्तर घट्यो, ईन्धनको प्रवाह पर्याप्त थिएन। म यसलाई सफा गर्न ईन्टर फिल्टर गर्न सकिनँ। ट्यांक भरेर वा केही फिक्री विलायक संग फ्लुलाई रिवर्स गरेर यो स्थानमा सफा गर्न सक्षम छ, वा गर्मी र / वा क्लोिल प्रयोग गरेर यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्, तर धैर्य गुमायो र यसलाई ड्रिल गरी ट्यांक आउटलेट र कार्बनको बीच रेखामा इनलाइन फिल्टर राख्नुहोस्। । अब मेरो JW धेरै राम्रो छ! मेरो ग्रूमम्यान स्पोर्ट वाट हटाउन सकिने ट्रेलिंग स्पीड अत्यन्तै ढिलो हुन सक्छ। हरेक समय राम्रो हुन्छ।
मैले जङ्गलको यो मोडेलको पुनर्वित्तको लागि सूचीलाई आवश्यक गर्न टंक ईंन्धन फिल्टरको R & R को ठेगाना लगाईरहेको छु।
जवाफ टंक भित्र ईन्धन फिल्टर by हिरोइन
मैले भर्खरै एक जॉनसन 3HP किन् ...
मैले भर्खरै एक जॉनसन 3HP खरिद गरेको छु र सिंक गरिएको कांस्य ईन्धन फिल्टर सफा बाहिर थियो। मैले लाक पतला र म्यूरिटिक एसिडलाई पनि प्रयास गरें। ईंन्धन टैंकको पहिलो 1 /2को लागि मात्र प्रवाह हुनेछ। मैले फिल्टर आउट गरे र पीतल फिटिंगको sinterd कांस्य प्रोटोनलाई काट्यो। मैले ज्यानसनको लागि फिटिंगमा पीतल स्क्रिन मिलाएर eBay बाट एक VW ग्याँस ट्यांक फिल्टरको लागि पर्खिरहेको छु। तपाईं लगभग $ 40.00 को लागि नयाँ OEM शैली फिल्टर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ तर म त्यो तिर्नु भएको थिएन। मैले 750 BBs र लगभग आठ औंस लाक पनीर को बारे मा छोडेर मेरो ग्याँस टैंक सफा गरे। मैले केही रबर प्लगहरू हरिवेयर भण्डारमा किनेका लागि ईन्टर भर्ने ह्वाल र कार्बोरेटर ईन्धन फिड होल प्लग गर्न। मैले लाइभ डेलाइट्स टैंकबाट दुई पटक घुमाएँ र त्यसपछि सूत्रले 409 र पानीसँग रिसाएको। ट्यांकको सफा।
बुझाउने ttravis मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 11 / 05 - 2017: 12
ग्ल्याट सुन्नु भएको छ तपाईले यो तपाइँको पुन: प्रयासको साथ काम गरिरहेको छ। मैले केहि खोज गरे। त्यो फिल्टरको लागि इनिन्रड अंश संख्या 0594034 हो। मैले यसलाई अमेजनमा भेट्टाउन सकेन, तर मैले केही सूचीबद्ध गरेको फेला परेन eBay।
जब सबै असफल भएमा, eBay प्रयोग गर्नुहोस्। म त्यहाँ धेरै भागहरु खरीद र एक eBay सहबद्ध को रूप मा साइन अप गर्ने योजना, धेरै रुचि छ amazon.com मा।
तपाईंको ठूलो सानो मोटरको आनन्द लिनुहोस्।
बुझाउने राउल सोम मा, 01 / 15 / 2018 - 03: 17
यकीन छ भने यो ...
यकीन छैन कि यो सही स्थान हो
तर मेरो 1963 विचित्र लाइटविन छ जुन मेरो स्कोउट समूहले मलाई दिएको थियो
यो राम्रो चकारी छ तर यो अभिनय छैन कि म टाउको ले लिया र पाया कि सम्पीडन वास्तव मा खराब छ शायद पिस्टन को छल्ले शायद पिस्टन को ठाँउ र सिलेंडर दीवारहरु को दोबारा बदलन को आवश्यकता हो
क्रेन सर्प बियरिंग्स पनि पहिए जस्तो देखिन्छ
यो सबै सम्भवतः खराब कूलिंगको कारणले गर्दा निम्न इकाई सम्भवतया पुनर्निर्माण चाहिन्छ
मलाई थप क्षतिको लागी पूर्ण मोटाई गर्न आवश्यक छ तर मेरो प्रश्न यो छ कि यदि कसैले यो ईन्जिनियरिङ् पुनर्निर्माण गर्ने अनुभव गरेको छ वा जान्दछ भने यो यसको पुनर्निर्माण गर्न योग्य छ भने
र कहाँ भागहरू खोज्नुहुन्छ मैले इन्टरनेटमा प्रतिस्थापन पिस्टन र रिंगहरूका लागि देखेँ तर उनीहरूलाई कुनै मद्दत प्राप्त हुने छैन।
बुझाउने ttravis सोम मा, 01 / 22 / 2018 - 14: 38
जवाफ यकीन छ भने यो ... by राउल
सङ्कुचनले के गर्दछ ...
तपाईंको परीक्षकमा कम्प्रेसनले के पढ्छ? 70-80 Psi हुनुपर्छ।
पार्टनहरू खोज्न गाह्रो हुन्छन्। तपाईं राम्रो हुन सक्छ ई-बे मा मोटर को भाग खोज्दै। कहिलेकाहीँ तिनीहरूले तिनीहरूलाई धेरै कम पैसाको लागि तपाईं भागहरूमा खर्च गर्नुभन्दा भन्दा कम छ।
बुझाउने राउल सोम मा, 02 / 12 / 2018 - 03: 57
जवाफ सङ्कुचनले के गर्दछ ... by ttravis
मेरो कम्प्रेसन छैन ...
म एक कम्प्रेसन परीक्षक छैन तर मैले निकास कवर प्लेट हटाउनुभयो र फ्लाईवाइललाई फर्काइयो र उनीहरूलाई सम्पीडनको लागि जब पिस्टनबाट आउँदै गरेको सुन्न सक्थे र कम्तिमा एक पिस्टनको एक बिट क्षतिग्रस्त देखिन्छ।
अब ब्लक छोडेर भागहरु मा विस्तृत रूप प्राप्त गर्न को लागी र बल को डिलले सिलिन्डरों को हड्डी हुन सक्छ यदि उनको आवश्यकता हो
तर म यसका लागि कुनै पिस्टनहरू फेला पार्न सक्दिनँ र नमिल्ने हातको घण्टीहरू म अनुहार मात्र सही सन्देशहरूसँग खरिद गर्न सकिन्छ।
बुझाउने राउल सोम मा, 02 / 12 / 2018 - 15: 22
जवाफ मेरो कम्प्रेसन छैन ... by राउल
ओकी मैले पुरा गरे ...
ओkeyले मैले सम्पूर्ण इन्जिन ब्लक लिनुभयो र सिलिन्डरहरू तलको अन्तमा केही रोचक स्कोर गर्दै छन्, त्यसैले अब मैले थाहा पाउछु कि यदि मैले मात्र ब्लक गर्न सक्छु वा ब्लक ओवरब्याक गर्न सक्छु
र दुवै पिस्टन नरकमा बन्छ
म पनि केहि सानो भागहरु जस्तै gaskets र यस्तो र केहि waterpump भागहरु को आवश्यकता हो, तर यो धेरै राम्रो लग रहेको छ त्यस पछि म सोचा कि यो
त्यसैले अब यो देखिन्छ मलाई2नयाँ पिस्टन चाहिन्छ र एक पूर्ण ग्याँसकेट सेट र एक पानीको पंप प्रवर्ती आवास (मैले बोट छेदबाट टाढा खराब कोषको कारण तोडेको छ)
तर अब यो कुराको साथ फँसिएको छ कि ब्लक मा कुनै बियरिंग्स जस्तो देखिन्छ कि यो असर को प्रकार केहि ब्लक मा डाली यो यस्तो पहना लगाउन जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ
कुनै नयाँ सुझावहरू र नयाँ पिस्टनका लिङ्कहरू धेरै स्वागत छन्
बुझाउने ricklummer मा शुक्र, 02 / 16 / 2018 - 07: 01
1963 इनिन्रude 3hp 3303s समुद्री इन्जिनियर ओभरराइज रिंग्स पिस्टन र अधिक
बुझाउने राउल Wed, मा, 02 / 21 / 2018 - 10: 24
जवाफ पिस्टन रङ्गहरू by ricklummer
मैले पहिले नै हेरे ...
मैले पहिले नै त्यो साइटलाई हेरेँ
ओभरराइज के छल्ले अझै पनि उपलब्ध छन् तर पिस्टन मूल र ओभरलाइज बनाइएका छैनन्
प्लस मैले ब्लकलाई एउटा पसलमा राखें र जस्तो लाग्छ कि उनीहरूलाई लाइट ओभरब्यान्ड गर्नु पर्छ
यसका लागी यो कुरामा तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ भने तपाईले तपाईलाई थाहा पाउनु भएको छ। पिस्टनहरू अधिक महंगा हुन सक्छन् यदि तिनीहरू खराब हुन बाहिर जान्छन्
यदि कसैलाई थाहा छ कि पिस्टन बनाउन सक्दछ जसले मद्दत पुर्याउन सक्छ म सबैले केहि ठाउँहरूसँग सम्पर्क गरेको छु तर उनी भन्छन् कि मलाई एक व्यापारीसँग सम्पर्क गर्न चाहन्छु तर मेरो देशमा मात्र विवेकपूर्ण व्यापारीले मेरो मोटरको लागि केहि छैन
बुझाउने राउल मा शुक्र, 02 / 23 / 2018 - 02: 59
जवाफ मैले पहिले नै हेरे ... by राउल
मैले केहि थप खोल्दै र ...
मैले केहि थप खुदाई गरेँ र यो सबै घुमाउरो एम्बाम्मी संग ब्लक फेला पर्यो राम्रो स्थितिमा यो पसल जसले मलाई पनि एक नयाँ इन्जिनियरिङ पढ्ने र यसको राम्रो इन्जिनको दावी गर्दैछ र उनीहरूले यो पहिले नै दौडिनु भएको थियो डिसेम्बर
पिस्टन कपडेटरले 250 को लागत अनुमानको साथ फिर्ता आएर बस पिस्टनको लागि पुरानो ब्लक को लागी म अब र सबै अन्य भागहरु संग 350 मा कुल राख्छ कि यो ईन्जिनियस लायक छ यदि म यो बेचन हुनेछ
यसैले अन्त मा यसको एक बम्मर छ कि म मूल ब्लक को उपयोग गर्छन तर कम से कम म गर्मी मा मेरी नाव मा उपयोग गर्न सस्ते आउटबोर्ड प्राप्त गर्छन
बुझाउने boatman350 सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 13: 45
57 ले हल्का वाहेक अन्य गियरहरू अगाडि बढेको छ
बुझाउने ttravis सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 14: 18
जवाफ lightwinn by boatman350
होइन, तपाईं पूरै स्पिन गर्नुहोस् ...
होइन, यदि तपाईं रिवर्समा जान चाहनुहुन्छ भने वरपर सम्पूर्ण मोटर स्पिन गर्नुहोस्। यो "डक बस्टर" भनिन्छ किनभने त्यहाँ कुनै तटस्थ वा रिवर्स छैन। वास्तविक प्रयोगमा, यो कुनै समस्या छैन।
बुझाउने boatman350 सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 17: 41
जवाफ होइन, तपाईं पूरै स्पिन गर्नुहोस् ... by ttravis
अलिकति कता कता कता?
बुझाउने boatman350 गुरु मा, 06 / 06 / 2019 - 07: 30
नहीं यो अझै अगाडी बढ्छ र ...
यो बस अगाडी बढ्छ र तपाईले इन्जिन 180 लाई फर्काउन यसको लागी फिर्ता डक बसटर भनिन्छ जुन मलाई भनिएको थियो
बुझाउने boatman350 सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 13: 53
मेरो पानीले बाहिर निस्क्यो। मैले भनेकी थिइनँ, "मैले भनेँ।" मैले भनेँ। त्यहाँ त्यहाँ एक वास्तविक बलियो स्ट्रीम आउँदछ
बुझाउने ttravis सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 14: 16
जवाफ impeller by boatman350
त्यहाँ केहि सानो हो ...
त्यहाँ दुईवटा हड्डीहरू छन् जुन पानीलाई बिछ्याउँछ र निचो इकाई बाहिर टाढ्छ। त्यहाँ पानीको एकदम धेरै चीज छैन। मेरो कफी निर्माताको रूपमा कफी छ।
बुझाउने boatman350 सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 17: 38
जवाफ त्यहाँ केहि सानो हो ... by ttravis
पानी छ भनेर बाहिर निस्कन्छ मध्यमा स्टड संग त्यो स्क्वायर छेद हो
बुझाउने ttravis सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 20: 40
मेरो साथ त्यस्तै समस्या थियो ...
मेरो3एचपी परियोजना मोटरसँग एउटै समस्या थियो। मैले सबै passageways अनलक गर्न थालें।
बुझाउने boatman350 सोम मा, 09 / 10 / 2018 - 22: 15
जवाफ मेरो साथ त्यस्तै समस्या थियो ... by ttravis
ठीक छ मलाई हटाउनु पर्छ ...
ठीक छ मलाई मोटर हटाउनु पर्छ र पानी जहाँ बाहिर आउनु भएको छ र के तपाईं बस टाउको लिनुभयो
बुझाउने dlofthhouse गुरु मा, 08 / 01 / 2019 - 14: 38
प्रणालीबाट कति पानी निस्कन्छ?
मैले यस स्ट्रि inमा पढें कि एक्जस्ट रिलीफ बाहिर निस्केको पानीको मात्रा ड्रिप कफी निर्माताको जस्तै हुनुपर्छ। म भन्न सक्छु मेरो त्यो बारेमा गर्छ। यद्यपि म यसका बारे चिन्तित छु, केहि मिनेटको टेस्ट रन पछि टाउको एकदम न्यानो छ कि म यसमा आफ्नो हात राख्न चाहन्न। विचारहरु?
PS - यो मेरो धेरै उपयोगी साइटमा पहिलो पोष्ट हो। सबैलाई धन्यवाद।
बुझाउने ttravis मा शुक्र, 08 / 02 / 2019 - 13: 57
जवाफ प्रणालीबाट कति पानी निस्कन्छ? by dlofthhouse
मलाई मोडल नम्बर चाहिन्छ त्यसैले म…
मलाई मोडेल नम्बर चाहिन्छ त्यसैले म तपाईंको प्रश्न अझ राम्रोसँग राख्न सक्दछु। केही मोटर्समा थर्मोस्टेट हुन्छ जुन बदल्न सकिन्छ; केही गर्दैनन्।
बुझाउने dlofthhouse मा मंगल, 08 / 06 / 2019 - 16: 31
जवाफ मलाई मोडल नम्बर चाहिन्छ त्यसैले म… by ttravis
मोडेल JW-15 हो
बुझाउने ttravis गुरु मा, 08 / 08 / 2019 - 01: 40
त्यहाँ कुनै थर्मोस्टेट छैन ...
त्यो मोटरमा कुनै थर्मोस्टेट छैन। पानीको मात्रा सहि देखिन्छ। यदि तपाईं पावरहेडमा आफ्नो हात समाउन सक्नुहुन्न, त्यसो भए तपाईंसँग केही प्रतिबन्ध हुन सक्छ। तपाईं सिलिन्डर हेडलाई कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्नको लागि हटाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ यसलाई बदल्नुहुन्छ, नयाँ हेड गस्केट प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस् .... टम
18-3841 सियरा टाउको गैसकेट
बुझाउने boatman350 मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 08: 07
म आरटीवी गैसकेट निर्माता प्रयोग गर्न सक्छु ...
म आरटीवी गैसकेट निर्माताले एक अस्थायी टाउको ग्याकेटको लागि र मोटर को लागी कम इकाईमा भेट्टाउन सतहको उपयोग गर्न सक्छु
बुझाउने ttravis मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 11: 13
जवाफ म आरटीवी गैसकेट निर्माता प्रयोग गर्न सक्छु ... by boatman350
म एक प्राप्त गर्न सिफारिस गर्नेछु ...
म एक उचित हेड गैसकेट प्राप्त गर्न सिफारिस गर्नेछु। RTV दबाव र गर्मी को सामना गर्न को लागि पर्याप्त बलियो नहीं हो, साथै यो पानी को जैकेट मा पुगन सक्छ र एक समस्या को कारण हुन सक्छ। मलाई थाहा छैन तपाईं कहाँ स्थित हुनुहुन्छ, तर मेरो लागि, टाउको गोसेट महंगा छैन। मलाई संसारमा केही मान्छेहरु थाहा छ एक कठिन समय भागहरु भाग र अधिक सुधार गर्न को लागी।
बुझाउने boatman350 मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 13: 12
पानी खरिदहरू सफा गर्ने बारेमा
बुझाउने ttravis मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 13: 26
मैले पावरहेड लिई र ...
मैले पावरहेड लिने र पानीको पूर्ण पथलाई प्रवर्धक इनपुटबाट पत्ता लगाइरह्यो, जहाँ यो कम एकाइमा निकासको साथ डम्प आउट हुन्छ। मैले सबैलाई हटाइरहेकी एक हावा नली र धेरै राम्रो तारहरू र ड्रिल बिटहरू प्रयोग गरें। म विश्वास गर्दछु कि मैले यसको बारे मा मेरो 3.0 या 5.5 परियोजनाहरुमा। यो केहि अन्धा थियो, त्यसैले मैले हावा नली प्रयोग गरेको हावा उड्न र यो कहाँ आउछ भनेर हेर्नुहोस्। यो थोडा समय लागेन। धेरै passageways सानो र सजिलै संग छेउमा छन्, धेरै मोटर्सहरू मार।
बुझाउने boatman350 मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 21: 35
हाई मान्छे नयाँ समस्या lol ...
यता मान्छे नयाँ समस्या लोलले टाउको समाते र सबै पानी पारेर धेरै गुमाएपछि सफा गरेपछि टाउको पुनःस्थापित गरेपछि (मूल ग्याकेटकेट प्रयोग गरेर) र अब मोटर सुरु हुने छैन कि यसलाई कारबाही पछि केही सेकेन्डका लागि जीवनमा चल्दछ। दहन कोठा मा साफ करो तर यस पछि केहि नहीं .... तिमी मान्छे को सोचछन
बुझाउने ttravis मा मंगल, 09 / 11 / 2018 - 21: 57
जवाफ हाई मान्छे नयाँ समस्या lol ... by boatman350
फ्लोट सुई अटकियो? तपाई ...
फ्लोट सुई अटकियो? तपाईं शायद पावर टाउको माथि उल्लेखित हुनुभयो जुन सुईको सामान्य स्थिति भन्दा अघि जम्मा भयो।
बुझाउने ejfellman मा शनि, 09 / 15 / 2018 - 17: 39
तपाईंको धुनमा निर्देशनहरू ...
तपाईंको ट्युन अप 3hp Lightwin को लागि निर्देशन (जो उत्कृष्ट हो, btw) के तपाईं सिलेंडर 1 लाई माथिल्लो वा निचो सिलेंडरलाई फोन गर्नुहुन्छ?
बुझाउने ttravis मा रवि, एक्सएनएक्सएक्स / 09 / 16 - 2018: 19
सिलिन्डर 1 माथिल्लो छ ...
सिलेंडर 1 माथिल्लो सिलेंडर हो।
बुझाउने Dipstick मा मंगल, 09 / 25 / 2018 - 16: 03
मैले भर्खरै 50 जॉनसनलाई ट्यून अप गरेँ; कार्ब, इग्निशन, प्रोभेलर, कार्यहरू। यो राम्रो चकारी छ तर तुरुन्तै बाढी छ, जहाँ ग्याँस कार्बोरेटर / एअर साइसेन्सर जडानबाट डिप्स गरिन्छ। जब मैले कार्बरी पुनर्निर्माण गरें, मैले सानो वसन्त गुमाएँ जुन फ्लोटमा फ्लोट सुई राख्छ। किनकि यी कार्बोरेटरहरू वसन्त छैन किनकि मैले यसलाई बिना एकै ठाउँमा राखेँ। यो बाढी यसैले, ले फ्लोट कटोरा लिनुभयो र एक वसन्त स्थापित गर्यो जुन मैले मेरो पुरानो भागहरु पाए (मेरो चार3एचपी इनिन्रude / जॉनसन छ)। यो अझै बाढी छ।
मैले उच्च गति सुई 1 र 1 /2घुमाउँछ र कम स्पीड सुई3/4मोडि बन्द गर्यो।